प्रेम दिवस : अचेल प्रेम गर्ने बढेका हुन् कि सामाजिक संजालको प्रभाव ? - Himalayan Kangaroo
प्रेम दिवस : अचेल प्रेम गर्ने बढेका हुन् कि सामाजिक संजालको प्रभाव ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १ फाल्गुन २०७२, शनिबार ०५:१८ |
-मीना शर्मा ।
सामाजिक सञ्जाल र हाम्रो क्रियाकलापले हाम्रो प्रेमलाई हल्का र फिक्का त बनाई दिएको छैन्? प्रेम अरुलाई देखाउन र बदला लिनको लागि गरिने कुरा होईन यो त्याग हो जो सधैँ एकनास हुन सकोस्।
रोज डे, चकलेट डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे, प्रमिस डे, भ्यालेन्टाईन डे यो साता यस्तै दिनको चर्चा चल्यो। केही वर्ष पहिलादेखी भ्यालेन्टाईन डे (प्रणय दिवस) का बारेमा नेपालमा निकै चर्चा हुन थाले पनि अन्य दिवसले पछिल्लो दुई वर्षदेखी अलि महत्व पाएका हुन्।
भ्यालेन्टाईन डे भोली, तर साथीहरूले १५ दिन अघिबाटै सोध्न थाले, के छ भ्यालेन्टाईन डे स्पेशल? मेरो जवाफ भ्यालेन्टाईन डे नआउँदै मेरो स्पेशल शुरु भईसक्यो। यति फास्ट? मेरो जवाफ, म दुई कदम अगाडी छु नी …। प्रेम को मामलामा म अगाडी छु की पछाडी त्यो भन्दा पनि अहिले के साँच्चिकै प्रेम गर्नेहरूको संख्या बढेको हो भन्ने प्रश्नले मलाई सताएको छ।
आजकल साँच्चिकै सच्चा प्रेम गर्नेहरू बढेका हुन् कि सामाजिक सञ्जालको प्रभाव हो यो ? सामाजिक सञ्जालमा यी दिवसहरूले जति चर्चा पाएका छन् वास्तविक जिवनमा आफ्नो नजिकको मान्छेसँग बसेर छलफल गर्ने समय छ त हामीसँग पक्कै पनि छैन्। आमा बुवाको मुख हेर्ने दिन बिहानै सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिँदै आमाबुवाले संसार देखाउनु भएकोमा नमन गर्नेहरूले वास्तविक जीवनमा सामाजिक सञ्जालमा खर्च गर्ने समय आमाबुवाका लागि खर्च गर्छन त ? यो पनि सोच्नु पर्ने कुरा हो।
कुनै कुरा पाउनु भन्दा त्यसलाई टिकाउनु मुश्किल पर्दछ। त्यस्तै प्रेम दिवस मनाउनु भन्दा पनि कसैलाई पे्रम गरी जिन्दगीभर त्यो प्रेमलाई निभाउनु कतिको मुश्किल छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मन परेको साथीसँगका धेरै कुरा सार्वजनिक गर्ने र सानो कुरामा चित्त नबुझ्दा दुश्मनी सुरु गर्नेहरूले साथीको मुख हेर्न मन छैन भन्दै ब्लक गरिदिएको पनि हामीले दिनहुँ देख्न सक्छौ।
सामाजिकिकरण हुने समयमा हामी सामाजिक सञ्जालीकरणको कुलतमा फसेका छौं। जसले हामीलाई नसेडी जस्तो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र हाम्रो क्रियाकलापले हाम्रो प्रेमलाई हल्का र फिक्का त बनाई दिएको छैन ? एक पटक त्यो सोच्न पनि जरुरी छ। प्रेम अरुलाई देखाउन र बदला लिनको लागि गरिने कुरा होईन यो त्याग हो जो सधैँ एकनास हुन सकोस। सँगै बसेका साथीको सन्चा बिसन्चोको अवस्था नबुझ्ने हामीहरू सामाजिक सञ्जालमा साथी दिवसको ठुला भाषण दिन्छौं। साँच्चिकै एक अर्कालाई प्रेम गर्नेहरूले आफ्नो समय एक अर्कामा समर्पित गर्दछन् न कि सामाजिक सञ्जालमा खर्च गर्दछन्।
भ्यालेन्टाईन डेको लागि भारतबाट गुलाबको फूल भित्र्याउँदै गर्दा हामीले सच्चा प्रेम गर्ने मानिसबाट आफ्नो मनमा केही भित्र्याउन सक्दैनाैं।
दिवस मनाउनु आफैँमा गलत होईन, तर अरुलाई देखाउन सामाजिक सञ्जालमा ठुला ठुला तस्बिर पोस्ट गर्दैमा के हामीमा सच्चा प्रेमको विकास हुन्छ र ? पक्कै पनि हुँदैन। हरेक दिन हत्या, हिंसाको आरोपमा महिला जलाईएको समाचार आउने हाम्रो समुदायमा प्रेम दिवस मनाउनु आवश्यक छ। तर, त्यो वास्तविक रुपमा मनभित्रबाट विकास भएको हुनु पर्दछ। प्रेम जसले जसलाई गर्दा पनि हुन्छ। यसको सीमा र निश्चित कोटा हुँदैन। मन परेको मान्छेलाई प्रेम गरेको नाटक गर्ने विवाह गर्न नपाउँदा दुश्मनी सुरु गर्ने पनि प्रेम हुन्छ र ? यो प्रश्न प्रेमिल मनहरूलाई।
एक साता अघि एकजना साथीको प्रश्न थियो तिमी भ्यालेन्टाईन डेको दिन के उपहार दिने विचार गर्दैछौ ? उसको प्रश्नले मेरो मनमा के उपहार दिनेभन्दा पनि कसलाई उपहार दिने भन्ने प्रश्न उब्जियो। यदी मन परेको मान्छेलाई उपहार दिन मन लाग्यो भने भ्यालेन्टाईन डे नै किन कुर्नु पर्यो र?
प्रेम दिवसमा पुस्तक बाहेक अन्य उपहार दिने सोच मसँग छैन। त्यसो त पुस्तक बाहेक अन्य उपहार छनौट गर्ने कुरामा म पछाडी छु। आफ्नो खास मान्छेलाई आफूलाई खास लागेका पुस्तक उपहार दिने मेरो निणर्य छ। यदी तपाईहरू पनि कसैलाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ भने दुई दिनमै ओइलाएर जाने कुरा किन दिनुहुन्छ।
प्रेम सदावहार रहेजस्तै उपहार पनि सदाबहार रहोस्। यो साता प्रेमका बारेमा चर्चा चले जस्तै पुस्तक प्रर्दशनीमा राखेका पुस्तकले पनि चर्चा पाएका छन्। प्रेम दिवसमा प्रेमी प्रेमीकालाई पुस्तक उपहार दिने केही युवा पुस्तक प्रदर्शनीमा पनि भेटिए। प्रेम पुरानो नभए जस्तै पुस्तक पनि पुरानो नहुने भएकाले जुन पुस्तक जहिले दिँदा पनि फरक पर्दैन।
एउटै घरका सन्तानले आमाबाबुको हालचाल सोध्दैनन्। एउटै विस्तारामा रहेका श्रीमान श्रीमती आपसी कुरा गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई महत्व दिन्छन्। यस्ता केही उदाहरणले पनि सामाजिक सञ्जालले हाम्रो सम्बन्ध चिस्याएको देखाउँछ। प्रेम वा आफ्ना अन्य व्यक्तिगत कुरालाई धेरै सार्वजनिक नगरौं जसले पछि पछुताउ बाहेक केही रहने छैन। सामाजिक सञ्जालमा देखावटी र बनावटी कुरा सार्वजनिक गर्ने, गुनासो पोख्ने भन्दा पनि आपसी मनमुटावलाई छलफल गरी हटाऔं हरेक दिन पे्रममय बनाऔं। इन्टरनेटले सम्बन्ध बिगार्ने विषयमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चर्चाहरू सुनिन्छ। इजिप्टका नागरिक वाइल घोनिमले भनेका छन् ‘पाँच वर्षअघि मैले भनेको थिएँ, तपाई समाजको मुक्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई इन्टरनेट चाहिन्छ। आज मलाई विश्वास छ, हामी समाजलाई मुक्त गर्न चाहान्छौं भने पहिला इन्टरनेटलाई मुक्त गर्नुपर्छ।’
घोनिमले भने जस्तै इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढा रहन त सम्भव छैन, तर सम्बन्धलाई गाढा राख्नको लागि यसलाई कम गर्न जरुरी छ।
यसपालीको प्रेम दिवसमा एक अर्कालाई प्रेम गराैं। यसलाई धेरै सार्वजनिक नगरौं। प्रेमलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक छैन।
लेखिका शर्मा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ
Previousश्रीपञ्चमी भर्सेस भ्यालेनटाईन डे
Nextकथा : ब्ल्याक भ्यालेन्टाइन
अब ‘बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकल,यस्तो छ मोडल
२९ कार्तिक २०७३, सोमबार ०५:४६
फेशनमा कर्ली परेला
१६ असार २०७६, सोमबार १४:०७